Posted on October 14, 2011 by mamyathway
Number of View: 24898
ကျွန်မတို့၏ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အကြီးအကဲဆိုသူများ ရှိနေတတ်ကြပါသည်။
တခါက တိုင်းပြည် အကြီးအကဲ တစ်ဦးသည် မိမိ၏ နာမည်နှင့် ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ချင်သည့်အတွက် ကိုယ့်ပုံကို တံဆိပ်ခေါင်းအဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေပြီး တလအကြာတွင် ရောင်းအား ကောင်းမကောင်း စာတိုက်ကြီးသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့သည်။
အကြီးအကဲ >>> ” ငါ့ပုံနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေ ရောင်းအားကောင်းရဲ့လားဟေ့ ”
စာတိုက်မှုး >>> ” ဟုတ်ကဲ့.. ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ..၊ ဒါပေမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းကော်က သိပ်မကပ်ဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်… “
အကြီးအကဲ >>> ” မဖြစ်နိုင်တာ.. “
ဒါနဲ့ အကြီးအကဲက ကိုယ်တိုင် တံဆိပ်ခေါင်း တစ်ခုကို ယူပြီး နောက်ကျောကို တံတွေးထွေးကာ စာအိတ်ပေါ်တွင် ကပ်ကြည့်လိုက်သည်။
အကြီးအကဲ >>> ” ကဲ… ဒီမှာ ကြည့်စမ်း၊ ကပ်တာမှ မြဲနေတာပဲ… “
စာတိုက်မှုး >>> ” အကြီးအကဲ ခင်ဗျာ… သူတို့က တံထွေးကို တံဆိပ်ခေါင်းအရှေ့ဘက်ကို ထွေးကြလို့ပါ… “
တခါက အကြီးအကဲသည် ညအချိန်တွင် တစ်ယောက်တည်း အပြင်ထွက်မိရာ လမ်းတွင် လုယက်သူနှင့် တိုးတော့သည်။
လုယုက်သူ >>> ” ဟေ့လူ…ပါသမျှ ပိုက်ဆံ အကုန်ထုတ် ”
အကြီးအကဲ >>> ” ငါဘယ်သူလဲဆိုတာ မင်းသိလား…ငါဟာ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးအကဲကွ ”
လုယုက်သူ >>> ” ကြိုက်ပြီ… ဒါဆို ယူထားသမျှတွေ အကုန်ပြန်ပေး “
သတင်းထောက်>>> ” ဆရာ…ဆရာ..အကြီးအကဲ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ ”
ဆရာဝန် >>> ” အင်း…အခြေအနေကတော့ သိပ်မကောင်းလေဘူး ”
သတင်းထောက်>>> “သူ့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေကော ”
ဆရာဝန် >>> ” သူတို့လဲ အခြေအနေ မကောင်းဘူး ”
သတင်းထောက်>>> ” ဒါဆို ဘယ်သူအခြေအနေ ကောင်းလဲ ဆရာ ”
ဆရာဝန် >>> ” ငါတို့ တိုင်းပြည် အခြေအနေ ကောင်းပြီ “
တခါက အကြီးအကဲသည် စိတ္တဇဆေးရုံသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဆေးရုံရှိ လူနာများက အကြီးအကဲကို တွေ့သည်နှင့်.. ” အကြီးအကဲ ကျန်းမာပါစေ… နေကောင်းပါစေ…. သက်တော် ရှည်ပါစေ…” ဟု ကောင်းချီးပေးကာ ကြိုဆိုကြသည်။ သို့သော် ထိုလူနာတစ်ဦးမှာ ဘာမှမပြောဘဲ အကြီးအကဲအား မျက်နှာလွှဲပြီး နေသည်။ အကြီးအကဲက မြင်သော် ” ဒီလူနာက ငါ့ကိုမြင်တာ တောင် မကြိုဆိုပါလား” ဟု ဆေးရုံအုပ်အား မေးလိုက်သည်။
“လူနာရဲ့ စိတ် ဒီနေ့ အခြေအနေကောင်းနေတယ်” ဟူ၏။
လူတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ အကြီးအကဲကို ” အသုံးမကျတဲ့လူ ” လို့ ပြောလို့ အဖမ်းခံရ သတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး နောက် တရားသူကြီးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်နဲ့ ၆ရက် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ကို ပေးရသလဲလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက ” ပြစ်ဒဏ် ၆ရက်က အကြီးအကဲကို စော်ကားတဲ့ အတွက်၊ ပြစ်ဒဏ် ၁၀နှစ်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ကောင် လုပ်တဲ့အတွက်” လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။
တစ်ခါက လူသားစားသော လူမျိုးနွယ် အကြီးအကဲ တစ်ဦး လေယာဉ်ပျံစီးလေသည်။
လေယာဉ်မယ် >>> ” လူကြီးမင်း…ဘာများ သုံးဆောင်ချင်ပါသလဲရှင်…”
အကြီးအကဲ >>> ” ခရီးသည်တွေရဲ့ နာမည်စာရင်းကို အရင်ပြစမ်းပါ…”
တစ်ခါက နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်သုံးဦးဟာ ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး နိုင်ငံအခြေအနေကို လှည့်လည်ခဲ့တယ်။
ပထမအကြီးအကဲ>>> ” တကယ်လို့ အခုချိန်မှာ ငါသာ ငွေတစ်ထောင်တန် တစ်ရွက်ပစ်ချလိုက်ရင် ကောက်ရတဲ့လူက အရမ်းပျော်မှာပဲ”
ဒုတိယအကြီးအကဲ>>> ” တကယ်လို့ ငါသာ ၅၀၀တန်နှစ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် လူနှစ်ယောက် ပျော်ရမယ်”
တတိယအကြီးအကဲ>>> ” တကယ်လို့ ငါသာ ၅၀၀တန်ဆယ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် လူဆယ်ယောက် ပျော်ရမယ်”
“အကြီးအကဲတို့ သုံးဦးလုံးသာ ခုန်ချလိုက်ရင် နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူတွေ အားလုံး ပျော်ကြမှာပဲ” ဟူ၏။
တစ်ခါက နိုင်ငံအကြီးအကဲ သုံးဦးဟာ ဘုရားသခင်ကို တွေ့ဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကို မေးခွန်းတစ်ခုစီ မေးဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တော့…
ပထမနိုင်ငံအကြီးအကဲ>>>”ဘုရားသခင်ကျွန်တော့်နိုင်ငံက ပြည်သူလူထုတွေ ကောင်းစားဖို့ ဘယ်နှနှစ်စောင့်ရဦးမလဲ”
ဘုရားသခင် >>> ” အနှစ် ၅၀ စောင့်ရလိမ့်မယ်”
ပထမနိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲ (စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့) “ဒါဆို ကျွန်တော် မမီတော့ဘူးထင်တယ်”
ဒုတိယနိုင်ငံအကြီးအကဲ>>>”ဘုရားသခင်…ကျွန်တော့်နိုင်ငံက ပြည်သူလူထုတွေ ကောင်းစားဖို့ ဘယ်နှနှစ်စောင့်ရဦးမလဲ”
ဘုရားသခင် >>> “နှစ် ၁၀၀ စောင့်ရလိမ့်မယ်”
ဒုတိယနိုင်ငံအကြီးအကဲ (စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့) ” ဒါဆို ကျွန်တော် မမီတော့ဘူးထင်တယ်”
တတိယနိုင်ငံအကြီးအကဲ>>> “ဘုရားသခင် ကျွန်တော့်နိုင်ငံက ပြည်သူလူထုတွေ ကောင်းစားဖို့ ဘယ်နှနှစ်စောင့်ရဦးမလဲ”
ဘုရားသခင် (စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့) ” ဒီတစ်ခါတော့ အကျွန်ုပ် မမီတော့ဘူး ထင်တယ်” ဟူတည်း။
ဒီရက်ပိုင်း ပို့စ်အသစ်များ မရေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဓိကက လက်ဆွဲတော် ကွန်ပြူတာလေး ဆိုင်ပို့ထားရပြီး အဲ့ဒီကွန်ပြူတာထဲမှာ ရေးလက်စ ပို့စ်တွေ ပါသွားပါတယ်။ ဒေတာတွေ ပြန်ဆည်လို့ မရရင်တော့ နှမျောစိတ်နဲ့ ရင်ကွဲရဦးပါမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ညစ်နေရင် ရယ်စရာတွေဘက် လှည့်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ အပေါ်က ရယ်စရာစာစုများဟာ မြသွေးနီဆီကို မိတ်ဆွေများ မေးလ်နဲ့ ဖော်ဝေါ့လုပ်ပေးထားတာတွေထဲက စုစည်းပေးလိုက်တာပါ။ မူရင်းရေးသူများကို ဒီနေရာကနေ ခရက်ဒစ်ပေးပါရစေရှင်..။
34 Responses to အကြီးအကဲ…ဆိုတာ
ရယ်စရာများကို လာဖတ်ပြီး ရယ်ပြုံးသွားပါတယ်အမ…..။ စိတ်ရော ဦးနှောက်အကြောကိုလျှော့ပေးလို့ ကျေးဇူး…။
Like( FB ထဲကလိုလေ…)
ဟားဟား ရယ်ရတယ်။ တကယ်ရယ်ရတယ်။ ကျေးဇူး။
တော်ပီ။ အကြီးအကဲ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ တော်ကြာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါ်ကုန်မှ ဒုက္ခ။း))
အကြီးအကဲဆိုတာ ကြီးလေ ကဲလေ ကို ခေါ်တာပါတဲ့။ သူကြီးမင်း ဒက်ဖနေးရှင်းလေ။ ဟာ ဟ။
အထာလေတွေနှင့် ရယ်သွာပါသည် ။
နံပါတ်(၃)က ဆရာဝန် ပြောသွားတဲ့ စကားလေးနဲ့ …
နံပါတ်(၇)က လေယာဉ်မှူး ပြောသွားတဲ့ စကားလေး သဘောကျတယ်…
ဟာသလေးတွေ ဖတ်ရင်း ရယ်မောသွားပါတယ် အစ်မ…
အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်သုံးဦးဟာ ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး နိုင်ငံအခြေအနေကိုလေ…အဲဒီတစ်ခု
ဖတ်ပြီးသားလေးတွေ ပါပေမယ့် ထပ်ဖတ်ပြီး ရယ်သွားပါတယ် အစ်မမြသွေး…။ စိတ်ညစ်စရာတွေလည်း အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပါစေရှင်။
ကွန်ပြာသူ ပြင်ပေးမယ်… မှ (အကြီးအကဲ)
အကြီးအကဲဖြစ်ရရင် မည်သို့သော အကြီးအကဲဖြစ်ချင်သလဲ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူကြိုက်တဲ့ အကြီးအကဲတွေ အားလုံးဟာ အသတ်ခံရလို့တဲ့။
ဟာသတွေက ထိထိမိမိရှိတော့ စောင်းများပြောနေသလား မှတ်ရ..
နာတို့အကြီးအကဲက ဒီလိုမှ မဟုတ်တာနေား)
အကြီးအကဲအကြောင်းဖတ်ရင်း ပြုံးမိတယ်မမ :):)
စိတ်ညစ်ညမ်းမှု အဆင်မပြေမှုတွေမှ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း..
အမလေး အစ်မရေ….. ခုန်ချ လိုက်ကြစမ်းပါစေ။ ဟဟဟ။
နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှု မဖြစ်အောင်တော့ စောင့်ထိမ်းမှ တော်မယ်ထင်တယ်။
Thanks ma ma mya thway ni!
တစ်ခါတစ်လေ အဖြစ်မှန်လေးတွေကနေ တဖြစ်လဲပြီး ဟာသလေးတွေ ဖြစ်တတ်တယ် မြသွေးရေ။
စိတ်ဖိစီးမှုလေးတွေကို ဖြေလျော့စေနိုင်တဲ့ ဟာသလေးတွေပါ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြီးအကဲတွေ။ ခိခိ။ မမရေ ဖတ်ပြီးရယ်မိသွားတယ်။း) အမောကိုပြေလို့…း)
ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားပါတယ် အစ်မရေ……
ဟုတ်တယ် အဲ့လို အကြီးအကဲတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ -ာနိုင်ငံဖြစ်နေမှာပဲ။၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြပါစို့။
ရယ်လည်းရယ်ရ မှန်လည်းမှန်နေတာမို့ 
ပို့စ်အသစ်တွေ ခုတစ်လော မဖတ်ရလို့ ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေမိချိန် ဒီစာလေးကိုဖတ်ရတာ တော်တော်လေးကို စိတ်လကပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်ရပါတယ်။
ပို့စ်အသစ်တွေ ခုတစ်လော မဖတ်ရလို့ ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေမိချိန် ဒီစာလေးကိုဖတ်ရတာ တော်တော်လေးကို စိတ်လက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်ရပါတယ်။
ညစ်နေတာတွေ အခုမှပဲ ပြေသွားတော့တယ်။
ထိမိတဲ့ ဟာသတွေက ပြုံးပျော်စေပါတယ် …
ကျွန်တော်သာ အကြီးအကဲ ဆိုရင်
(( ဒီပိုစ့် တင်တဲ့တဲသူ ..မသေမချင်း သားရည်ပင်း နှင့်ပစ်သက် စေ))
လို့ အမိန့်ထုပ်မှာဗျ.. ဟီးးး